musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » LGBTQ » 2021 Honours ye IGLTA 37th Global Convention Yakaziviswa
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • tsika nemagariro • Hospitality Industry • Kodzero Dzevanhu • LGBTQ • Musangano Weindasitiri Nhau • misangano • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
LGBTQ + shasha yekushanya Matt Skallerud, ane mukurumbira LGBTQ + anofambidzana mubatsiri Annette Kishon-Pines uye Atlanta Black Pride Weekend ichakudzwa panguva yeGLTA's 37th Global Convention.
Longtime shasha yeLBBTQ + yekushanya Matt Skallerud achagamuchira iyo Hanns Ebensten Hall yeMukurumbira Mubairo.
Ngano mukushanya uye anoshingaira LGBTQ + mubatsiri, Annette Kishon-Pines achagamuchira IGLTA yekutanga Ally Award.
Atlanta Black Kudada Kwesvondo ichagamuchira IGLTA's 2021 Pathfinder Award.
IGLTA yemakumi matatu nenomwe yeGlobal Convention inoitika 37-8 Gunyana, gore rino ichiitika kekutanga muAtlanta, Georgia
Mbiru nhatu dzeLGBTQ + kushanya, kushambadzira nekupa masimba - Pink Media's Matt Skallerud, Belmond's Annette Kishon-Pines uye Atlanta Black Pride Weekend - vanozogamuchira gore rino IGLTA Honours. Yakasarudzwa nesangano revatungamiriri revatungamiriri, iyi mibairo inopihwa kune vanhu kana mabhizinesi akazvipira kugadzirisa mamiriro epasirese LGBTQ + vafambi. IGLTA Honours ichaunzwa nerutsigiro rwakakura rweKushanyira Philadelphia ku IGLTA's makumi matatu neshanu Musangano Wepasi Pese, seta iyo Hotera Midtown, Atlanta, 8-11 Gunyana.
Mukwikwidzi wenguva refu weLGBTQ + yekushanyirwa Matt Skallerud achagamuchira iyo Hanns Ebensten Hall yeMukurumbira Mubairo, yakatumidzwa kubva kumurume anofungidzirwa sababa vekufamba ngochani, uye ane mazita ekuremekedzwa anopiwa gore rega rega kune yakasarudzika IGLTA nhengo. Skallerud, purezidhendi wePink Media, anozivikanwa uye anoremekedzwa nebasa rake risinganete mune ese maindasitiri ekufambisa nekutengesa, uye ari mumwe wevanyanzvi vepasi rose mukushambadzira kweLGBTQ +. Kwemakore anopfuura makumi maviri, Skallerud yakabatsira makambani eese saizi kusvika LGBTQ + vatengi vepamhepo uye ikozvino yakanangana nekucheka-kumucheto zvigadzirwa zvepasirese muzvirongwa zvekutenga kushambadzira, pasocial network uye newebhu 20 matekinoroji. Aimbova IGLTA bhodhi sachigaro, iboka rakajairika paboka reGore Negungano reMagungano, atoita mapoinzi mazhinji ezvekushambadzira enhau kune vanoenda. Akagadzirawo yekutanga media media network mukati megungano reGLTA muna2.0 muLas Vegas.
Ngano mukushanya uye anoshingaira LGBTQ + mubatsiri, Annette Kishon-Pines achagamuchira IGLTA yekutanga Ally Award. Iyi Rukudzo inopihwa kune mumwe munhu, bhizinesi kana sangano iro, kunyangwe isiri LGBTQ +, rakaratidza kuzvipira kwenguva refu kusimudzira kufamba kunosanganisira, zvichibatsira kusimudzira zviitiko zvevafambi veLBBTQ + pasirese. Kishon-Pines akapedza makore angangoita makumi mana kuboka rinoshamisa reBelmond rekushanya, achishanda semaneja wawo wekushanda uyezve mukuru wezvekutengesa pasirese kweAmerica. Mu2015 akagadza Belmond wekutanga akazvipira director weLBBTQ kutengesa, uye gore rakazotevera rakatarisana nekugadzirwa kweLBBTQ Advisory Board, yekutanga yerudzi rwayo muindasitiri. Mumakore ake ese kuBelmond, Kishon-Pines yakapa rutsigiro kumashure kune vasingaverengeke LGBTQ + kufamba varongi, masangano ekodzero dzevanhu uye masangano anobatsira, achishanda sechiedza chehukama mukati meindasitiri yepasirese yekushanya.
Atlanta Black Pride Weekend - imwe yemhemberero dzepasi rose dzekuzvitutumadza - ichagamuchira IGLTA's 2021 Pathfinder Award, yakapihwa mumwe munhu, bhizinesi, kana sangano rinobatsira zvakanyanya kwavanoenda, uye richiratidza mwero wepamusoro wekudziya nekugamuchira vaeni zvakanaka. LGBTQ + nharaunda. Korona jewel yechiitiko iyi isingabatsiri Pure Heat Community Festival, iyo inopa chiitiko chekunze chekugamuchira mahara chakazadzwa nemumhanzi, varaidzo, chikafu uye kunakidzwa, zvine chinangwa chekusimudzira kutaurirana, kupa mienzaniso yakanaka, kupa vanhu vese simba, uye kupokana rusarura mukati iyo LGBTQ + nenharaunda dzakabatana. IGLTA iri kutsigira Pure Heat Community Festival gore rino, pamwe chete negungano rayo.
IGLTA yemakumi matatu nenomwe yeGlobal Convention inoitika 37-8 Gunyana, gore rino ichiitika kekutanga muAtlanta, Georgia.